အနုပညာအမွေအနှစ်တွေ ကြားပျော်ရွှင်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ
အနုပညာအမွေအနှစ်တွေ ကြားပျော်ရွှင်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ
17 Sep 2018 . 2:40 PM
အနုပညာအမွေအနှစ်တွေ များစွာရှိတဲ့ ပုဂံမြေကို ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ အတူ စာလေးတစ်ကြောင်းကို လည်း အခုလိုရေးထားပါတယ်။ “အနုပညာအမွေအနှစ်တွေစုစည်းရာ”ပုဂံမြေ”. .မှာ” ဆိုပြီးတော့ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အန်တီဂွမ်းလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံကိုဆိုရင် ပရိသတ်တွေကချစ်ကြသလို အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း သူမကို ချစ်ခင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။
သူမ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေဟာဆိုရင် မို့မို့မြင့်အောင်တို့ မင်းသမီးလုပ်ခဲ့တဲ့ လက်ထက် ကတည်း က အခုဆိုရင် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့ ဖွေးဖွေးတို့ လက်ထက်အထိကို သူပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေက လက်ညှိုးထိုး မလွဲပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ပို့ တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာလည်း အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ ဆုကို “ဤအရာကိုအချစ်ဟုခေါ်သလား” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: Tekktho Goon Poon Facebook
အနုပညာအမှအေနှဈတှေ ကွားပြျောရှငျနတေဲ့ တက်ကသိုလျဂှမျးပုံ
အနုပညာအမှအေနှဈတှေ မြားစှာရှိတဲ့ ပုဂံမွကေို ရောကျရှိနတေယျဆိုပွီးတော့ တက်ကသိုလျဂှမျးပုံ က သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ပြျောရှငျနတေဲ့ ဓါတျပုံတှနေဲ့ အတူ စာလေးတဈကွောငျးကို လညျး အခုလိုရေးထားပါတယျ။ “အနုပညာအမှအေနှဈတှစေုစညျးရာ”ပုဂံမွေ”. .မှာ” ဆိုပွီးတော့ ရေးထားတာဖွဈပါတယျ။
အနျတီဂှမျးလို့ ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ တက်ကသိုလျဂှမျးပုံကိုဆိုရငျ ပရိသတျတှကေခဈြကွသလို အနုပညာရှငျအသိုငျးအဝိုငျးကလညျး သူမကို ခဈြခငျကွတာတှရေ့ပါတယျ။
သူမ ပါဝငျတဲ့ ဇာတျကားတှဟောဆိုရငျ မို့မို့မွငျ့အောငျတို့ မငျးသမီးလုပျခဲ့တဲ့ လကျထကျ ကတညျး က အခုဆိုရငျ ဝတျမှုနျရှရေညျတို့ ဖှေးဖှေးတို့ လကျထကျအထိကို သူပါဝငျတဲ့ ဇာတျကားတှကေ လကျညှိုးထိုး မလှဲပါဘူး။ သရုပျဆောငျကောငျးတဲ့ ဇာတျပို့ တဈယောကျဖွဈလို့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈအကယျဒမီပေးပှဲမှာလညျး အကောငျးဆုံးအမြိုးသမီးဇာတျပို့ ဆုကို “ဤအရာကိုအခဈြဟုချေါသလား” ရုပျရှငျဇာတျကားနဲ့ ရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဂျပန်အစားအစာ ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ရှယ်အရသာ Ramen စားချင်နေတဲ့သူတွေ ရှိလားဗျို့
ယနေ့ နောက်ဆုံးရ နည်းပညာသတင်းများ (ဇွန်လ၊ ၂၂)
by Nigma .4days ago
2K Display နဲ့ Kirin 980 တို့ ပါဝင်တဲ့ Huawei MediaPad M6 တက်ဘလက် ထွက်ရှိ
နော်ဝေးနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပင်လယ်ရေအောက် စားသောက်ဆိုင်